Adiyisɛm 13 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Yosua Atemmufo Rut 1 Samuel 2 Samuel 1 Ahene 2 Ahene 1 Beresosɛm 2 Beresosɛm Esra Nehemia Ester Hiob Dwom Mmebusɛm Ɔsɛnkafo Solomon Dwom Yesaia Yeremia Kwadwom Hesekiel Daniel Hosea Yoel Amos Obadia Yona Mika Nahum Habakuk Sefania Hagai Sakaria Malaki Mateo Marko Luka Yohane Asomafo Nnwuma Romafo 1 Korintofo 2 Korintofo Galatifo Efesofo Filipifo Kolosefo 1 Tesalonikafo 2 Tesalonikafo 1 Timoteo 2 Timoteo Tito Filemon Hebrifo Yakobo 1 Petro 2 Petro 1 Yohane 2 Yohane 3 Yohane Yuda Adiyisɛm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
13 Na okogyinaa mpoano anhwea+ so. Na mihuu akekaboa+ bi a ɔwɔ mmɛn du+ ne ti+ ason sɛ ofi po+ mu repue, na na ahemmotiri du bobɔ ne mmɛn ho, na abusudin+ nso wowɔ ne ti ho. 2 Na aboa a mihuu no no te sɛ ɔsebɔ,+ nanso na ne nan te sɛ osisi+ de, na n’ano te sɛ gyata+ ano. Na ɔtweaseɛ+ no de n’ahoɔden ne n’ahengua ne ne tumi+ kɛse no maa aboa no. 3 Na mihuu ne ti no mu biako te sɛ nea wɔatwa ma ɔreyɛ awu, nanso wɔsaa ne pirakuru+ no na asase nyinaa dii aboa no akyi a ne ho yɛ wɔn nwonwa. 4 Na wɔsom ɔtweaseɛ no efisɛ ɔde tumi maa aboa no, na wɔsom aboa no kae sɛ: “Hena na ɔte sɛ aboa no, na hena na obetumi ne no ako?” 5 Na wɔmaa no ano a ɛka nsɛnkɛse+ ne abususɛm,+ na wɔmaa no tumi a ɔde bɛyɛ adwuma asram aduanan abien.+ 6 Na obuee n’ano kaa abususɛm+ tiaa Onyankopɔn, de tiaa ne din ne n’atenae, kyerɛ sɛ wɔn a wɔtete ɔsoro+ no. 7 Na wɔmaa no kwan+ sɛ ɔne akronkronfo no nko na onni wɔn so nkonim,+ na wɔmaa no mmusuakuw ne nkurɔfo ne kasa ne aman nyinaa so tumi. 8 Na wɔn a wɔte asase so nyinaa bɛsom no; wɔn mu biara nni hɔ a wɔakyerɛw ne din wɔ Oguammaa a wokum+ no no nkwa nhoma+ mu, fi bere a wɔhyɛɛ wiase ase.+ 9 Sɛ obi wɔ aso a, ma ontie.+ 10 Sɛ nkoasom mu na ɛsɛ sɛ obi kɔ a, ɔbɛkɔ nkoasom+ mu. Sɛ obi de nkrante kum a, ɛsɛ sɛ wɔde nkrante kum no.+ Ɛha na akronkronfo+ no boasetɔ+ ne wɔn gyidi+ ba asɛm no mu. 11 Na mihuu aboa+ foforo sɛ ofi asase mu repue,+ na na ɔwɔ mmɛn abien te sɛ oguammaa, nanso ofii ase kasae sɛ ɔtweaseɛ.+ 12 Ná ɔde aboa+ a odi kan no tumi nyinaa yɛ adwuma wɔ n’anim. Na ɔma asase ne wɔn a wɔtete so no som aboa a odi kan a wɔsaa ne pirakuru no.+ 13 Na ɔyɛ nsɛnkyerɛnne+ akɛse, na ɔma ogya mpo fi soro ba asase so wɔ adesamma anim. 14 Na esiane nsɛnkyerɛnne a wɔma ɔyɛ wɔ aboa no anim nti, ɔdaadaa wɔn a wɔte asase so no ka kyerɛ wɔn sɛ wɔnyɛ ohoni+ mma aboa a onyaa nkrante kuru+ nanso ɔsan nyaa ahoɔden no. 15 Na wɔmaa no kwan sɛ ɔmfa ahome mma aboa no honi no, na ama aboa no honi no akasa na wama wɔakum wɔn a wɔnsom aboa no honi+ no nyinaa. 16 Na ɔhyɛ obiara,+ nketewa ne akɛse, adefo ne ahiafo, adehye ne nkoa, sɛ wɔmma wɔn agyiraehyɛde wɔ wɔn nsa nifa ho anaa wɔn moma so,+ 17 na obiara ntumi ntɔ anaa ɔntɔn gye nea ɔwɔ agyiraehyɛde no bi, aboa no din+ anaa ne din akontaahyɛde no.+ 18 Ɛha na nyansa ba asɛm no mu: Ma nea ɔwɔ adwene mmu aboa no akontaahyɛde no ano, efisɛ ɛyɛ onipa+ akontaahyɛde; na n’akontaahyɛde no yɛ ahansia aduosia asia.+